I-Chemistry yokutshintsha umbala we-Egg Yolk
Ngaba Kunokwenzeka Ukutshintsha Umbala we-Egg Yolk?
Izinkukhu kunye nezinye iinkukhu zivelisa amaqanda nge-yellow yellow to yolk orange, ngokuxhomekeke ekudleni kwabo. Unokutshintsha umbala weqanda leqanda ngokutshintsha oko inkukhu idla okanye ngokufaka idayi ecocekileyo enamafutha eqanda leqanda.
Umbala we-Egg kunye nesondlo
Igobolondo le-egg kunye ne-yolk umbala ayihambelani nomxholo wesondlo okanye ukunambitheka kweqanda. Umbala wegobolondo ngokwemvelo uqala ukusuka kumhlophe ukuya kumdaka kuxhomekeke kwintlobo yenkukhu.
Umbala we-Yolk uxhomekeke ekudleni okudliwayo kwiinkukhu. Ubungakanani bebhoksi, umgangatho wokupheka, kunye nexabiso leqanda alichaphazelekayo ngumbala walo.
Ndinokuyidla I-egg Yolks?
Impendulo emfutshane kukuba ewe, unokuyila. Nangona kunjalo, kuba izikhupha zeqanda ziqukethe lipids, kufuneka usebenzise idayi enqabileyo. Imibala yokutya eqhelekileyo ingasetyenziselwa ukutshintsha umbala omhlophe weqanda, kodwa ayiyi kusasazeka kwiqanda leqanda. Unokufumana idayi yokutya e-oli e-Amazon nakwiindawo zokupheka. Ngenisa nje idayi kwi-yolk kwaye uvumele ixesha lokuba umbala ube yi-yolk.
Ukutshintsha umbala we-Yolk kuMthombo
Ukuba uphakamisa iinkukhu, ungatshintsha umbala weengqungquthela zamaqanda ezivelisa ngokulawula ukutya kwazo. Ngokukodwa, ulawula i-carotenoids okanye i-xanthophylls ayidlayo. I-Carotenoids i-molecule ye-pigment efunyenwe kwizityalo, ejongene ne-orange yolitikiti, ebomvu yeebhunge, i-yellow, i-marigolds, i-purple, i-cabbages, njl. R) obomvu kunye noLucantin (R) ophuzi.
Ukutya ngokwemvelo kuchaphazela nombala we-yolk. Ingqombela, i-orange, ibomvu, kwaye mhlawumbi ifumaneka emfusa, kodwa ngokuluhlaza okwesibhakabhaka nokuluhlaza kufuneka usebenzise idayi zokwenziwa.
Ukutya okunokuthi kuthinteke i-Egg Yolk Color
Yolk Umbala Isithako
phantse ngebala ngqolowa emhlophe
izikhupha eziluhlaza ngqolowa, ibhali
izilwanyana eziluhlaza ixhefu, i-alfalfa isidlo
izikhupha eziluhlaza marigold petals, kale, imifino
i-orange kwimibala ebomvu izaqathe, utamatisi, iipilisi ebomvu
Iibilisi ezinzima ezisikiweyo ze-Egg Yolks
Unokufumana amaqanda aluhlaza okomhlaza ngamaqanda abilayo. Ukugqithiswa kwemiphumo kubangelwa ukusetyenziswa kweekhemikhali ezingenakubungozi lapho i-hydrogen sulfide eveliswa yi-sulfur kunye ne-hydrogen kwimhlophe yeqanda ithatha insimbi kwi-yolk. Bambalwa abantu abajonga ukuba ngumbala wokudla okhangayo, ngoko unokuba unqwenela ukuthintela lo mpendulo ngokukhawuleza amaqanda ngamanzi abandayo emva kokubilisa kanzima.
Kutheni i-Egg Yolks iphendulela okuhlaza
Yenza i-Fried Fried Change Eggs Eguqulela
Ukukhawuleza kweMoya kwiiNtshu
Compact ye-Mayflower ye-1620
Inkcazo nenjongo yeLizwi lesiSilamsi elithi 'Subhanallah'
Iipropati zeMichiza zeMatter
C uLwimi loLwimi lwabaQaleli